Madheshvani : The voice of Madhesh - मधेशी दललाई कमजोर बनाउने प्रधानमन्त्रीको रणनीति : डा.अमरेश कुमार सिंह
० सभामुखमा नेपाली कांग्रेसले उम्मेद्वारी किन नदिएको हो ?
— सभामुखका लागि कांग्रेसको उम्मेद्वारी नपर्नु दुःखद कुरा हो । पार्टी नेतृत्वले सत्तारूढ दल नेकपासँग कुरा गरेको थियो, जसमा उपसभामुख कांग्रेसलाई दिने सहमति भएको हो । त्यो आधारमा सभामुखका लागि कांग्रेसले उम्मेद्वारी दिएन । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिंगका हुनुपर्नेछ । कांग्रेस दोस्रो ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी हो । सशक्त र बलियो लोकतन्त्र बनाउनका लागि कांग्रेसलाई उपसभामुखको भूमिका दिन आवश्यक देखिन्छ । त्यो हिसावले नेकपासँग कांग्रेसको अनौपचारिक सहमति भएको छ । अब नेकपाले त्यो सहमति कति पालना गर्छ, हेर्न बाँकी छ ।
० तर, उपसभामुख राजपालाई दिने भन्ने चर्चा पनि छ नि ?
— नेकपामा दुईटा धार देखिन्छ, एउटा प्रधानमन्त्रीजीको धार र अर्को प्रचण्डजीको । प्रधानमन्त्रीजीको धार कांग्रेसलाई त्यतिकै ललिपप देखाएर अड्काउने र राजपालाई सरकारमा ल्याउने रणनीति रहेको देखिन्छ । तर, प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया बाँकी छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र बलियो बनाउनुपर्ने भएकाले काँग्रेससँग नजिक रहन चाहनुभएको छ । त्यसैले, प्रचण्डले कांग्रेसलाई उपसभामुख दिन चाहनुभएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले राजपालाई सरकारमा ल्याएर समाप्त पार्ने योजना देखिएको छ । यदि त्यसो भयो भने राजपा फुट्छ ।
० भनेपछि राजपालाई सरकारमा ल्याएर विभाजन गराउने रणनीति हो ?
—मधेशका दलहरू राजपा र समाजवादी दुवैलाई जनस्तरमा कमजोर बनाउने प्रधानमन्त्रीको सिधा रणनीति हो । समाजवादी पार्टी झण्डै–झण्डै फुटको संघारमा थियो तर, सरकारबाट बाहिरिए पछि जोगिन सफल भयो । दुवै दलमा अहिले पनि विवाद देखिन्छ र त्यो विवाद सत्ताधारी पार्टीबाट नै सिर्जना गराइँदैछ । किनभने मधेश जहिले पनि सत्ताविरोधी शक्ति हो । लोकतन्त्र विरोधीलाई खबरदार गर्नका लागि एउटा शक्ति चाहिन्छ । मधेशका जनता जहिले पनि राज्यसत्ताबाट ठगिएको महसुस गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा सत्तामा बस्नेले रणनीतिकरूपमा हेर्छन् । मधेशी दललाई फुटाइदिएपछि मधेशलाई ठूलो धक्का लाग्छ । नेकपालाई लाग्छ कि मधेशका लागि कांग्रेसले आन्दोलन गर्दैन । तर, अब मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायतका समुदायका बारे कांग्रेसको प्रष्ट दृष्टिकोण आउनुपर्छ ।
० प्रचण्डले उपसभामुख कांग्रेसलाई दिने सहमति त गर्नुभएको छ तर, अर्को पक्ष मान्छ त ?
— होइन, अस्तिदेखि सभामुख प्रचण्ड खेमालाई दिइँदैन, प्रधानमन्त्री जे चाहनुहुन्छ त्यही हुन्छ भन्ने पनि चर्चा थियो नि । तर, प्रचण्डजीको खेमाले सभाुमख पाएरै छाड्यो । राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रचण्डजी र प्रधानमन्त्रीजीले कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
० सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्नुको कारण प्रतिपक्षी कमजोर भएकोले हो ?
— यो आर्थिक वर्षको प्रथम छ मासिक बितिसक्यो तर यो सरकारले १२÷१३ प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हो । साधारण खर्च हुने, विकास खर्च नहुने, यसले कसरी समृद्धि आउँछ । मैले पहिला नै भनेको थिएँ कि माओवादी र एमालेको मिलन भनेको पानी र तेलको मिलन हो । पानी र तेल जसरी मिसिँदैन त्यसरी नै एमाले र माओवादी मिसिँदैन, ढिलो–चाँडो अलग नै हुन्छ । सत्तास्वार्थको जुन समीकरण बन्छ, त्यसले राष्ट्र निर्माण हुँदैन ।
० तर, कांग्रेसले पनि सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन नि ?
— संसद चलेपछि कांग्रेसको सशक्त भूमिका देखिन्छ । अब हामी सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिकामा अगाडि बढ्छौं ।
० कांग्रेसको आन्तरिक विवाद मिलिसक्यो ?
— अलिअलि विवाद हुन्छन्, यो कुरा हरेक पार्टीमा हुन्छन् । किनकि राजनीति भनेकै ग्रुप गेम हो । त्यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हो, यसले खासै फरक पर्दैन ।
० तर, यही आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका कारण कांग्रेस दिनप्रति कमजोर हुँदै गइरहेको छ नि ?
— बाहिर त्यस्तो देखिएको हो तर, कांग्रेस कमजोर भइरहेको छैन । आगामी दिनमा कांग्रेस झन् बलियो हुँदै जानेछ । जनताको चाहनाविपरीत हाम्रा नेताहरू जान सक्दैन ।
० कांग्रेसका वर्तमान नेतृत्वप्रति विभिन्न असन्तुष्टिहरू देखिएको छ नि ?
— ७५ कटेकालाई नेतृत्व दिनु हुँदैन, अभिभावकको भूमिकामा राख्नुपर्छ । अब नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ । जसको सैद्धान्तिक आधार बलियो हुन्छ, जसमा जोश र जागरका साथ काम गर्ने भावना हुन्छ त्यस्तालाई अब कांग्रेसको नेतृत्व दिनुपर्छ । किनभने त्यो नेतृत्वले नै आगामी दिनमा नेतृत्वदायी भूमिकामा आउँछन् । अहिलेका नेतृत्वप्रति मिडियामा धेरै कुराहरू आइसकेका छन् ।
० अहिले एमसीसीका बारेमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । एमसीसी किन पास हुनुपर्छ ?
— कुनै पनि विदेशी अनुदान लिनुपर्छ । यो एमसीसी नेपालको हितमा छ । त्यसैले एमसीसी पास हुनुपर्छ ।